“Bushido 1” : ho avy haneho ny Kuk sool ny Me Kim (NewsMada) | AEMW
“Bushido 1” : ho avy haneho ny Kuk sool ny Me Kim (NewsMada)
Efa vonona tanteraka ny fandraisana ny “Bushido 1”. Hetsika karakarain’ny Cam (Collectif des arts martiaux), hatao etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny alahady 4 septambra ho avy izao. Fampisehoana sy fifaninanana «cash» ary «combat de défi», hataon’ireo haiady rehetra misy eto Madagasikara izany. Anisan’ireo vahiny ho avy, ary haneho ny fahaizany, ilay manampahaizana avy any Korea, Me Kim, 5 è Dan amin’ny Kuk sool. Raha tsiahivina, izy no nampianatra ny “Resep” teo aloha na ireo mpiambina ny filoha Ratsiraka Didier, tamin’ny fotoanandrony.
Notsiahivin’ny Me Rakotomavo Herilova, filoha lefitry ny Cam fa hotolorana medaly sy amboara ireo mpandresy. Tsy hisy ny vidim-pidirana fa hisy kosa boatin-drakitra eo am-baravarana handrotsahan’ireo mpijery izay foiny, ho fampandehanana ny fikambanana.
Ankoatra izay, ho hita mandritra ity hetsika goavana ity koa ireo haiady nentim-paharazana. Tanjon’ny Cam amin’izao hetsika izao, ny hisian’ny firahalahiana sy fifankatiavana, eo amin’ny samy mpanao haiady ka ho modely eo amin’ny fiaraha-monina.
← «Afrobasket women 2016» : lavon’i Angola i Madagasikara (NewsMada)
Fihaonambe Ticad fahenina atsy Nairobi : hanampy ara-bola sy amin’ny fotodrafitrasa ny Japoney (NewsMada) →